Guddiga doorashooyinka oo shaaciyay Tirada Xildhibaanada la doortay
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Dadban ee dalka Mudane Cumar Maxamed Cabdulle Dhagey oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in doorashada Aqalka Hoose ay u socoto si wanaagsan.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in ilaa iyo hada la doortay 155 xildhibaan oo 20 ka mid ah yihiin dumar , waxaana uu sidoo kale sheegay in doorashada Aqalka Sare la doortay 43 xubnood , halka doorashada Aqalka Hoosana la doortay 112 mudane.
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Dadban Abuukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhagey ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan sidoo kale Musuq maasuq la sheegay in ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee guuleystay.
Beesha Caalamka ayaa ugu baaqdey Madasha Hogaamiyayaasha Qaran in ay awoodooda u isticmaalaan in ay wax uga qabtaan ugana hortagaan xad gudubka iyo cadaalad darada ka dhex jirta hanaanka doorashada.
Xadgudubkaas ayey beesha caalamku sheegtey in ay ka mid yihiin, gaboodfal iyo cabsi gelin lagula kacay musharixiinta ergooyinka oo la maquunsadey iyo liiska musharixiinta iyadoo loo isticmaalayo ciidamada amaanka iyo hantida dowladda si musharax xildhibaan mid kale looga hormariyo.